Andro: 21 mey 2020
Orinasa mandrafitra tranonkala izay mamolavola endrika ho an'ny tranokala dia tokony hampiseho ny serivisy miaraka amin'ny fepetra sasany. Raha tsy izany, hiteraka asa ratsy sy diso toerana ary tsy hahatrarana ny valiny. [More ...]
Voalaza fa mpanondrana ranomasina an'arivony 150 tapitrisa ao an-dranomasina no misy andian-dranomasina ao anaty ranomasina raha toa ka voatery manitatra ny fifanarahana nataony imbetsaka izy ireo noho ny fipoahan'ny corona. Araka ny fivoriambe iraisam-pirenena, talohan'ny nanombohan'ny fialan-tsasatra ny mpanjono, [More ...]
Ny fepetra fividianana ny taratasy fanamarinana dia voafaritra miaraka amin'ireo rafi-pika nekena TURKAK, izay natomboka teo ambany fandrindran'ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny fizahantany, ary hamoaka fanamarinana ao anatin'ny rafitry ny "Program fanamarinana ara-pahasalamana mahasalama", izay iray amin'ireo ohatra voalohany eto amin'izao tontolo izao. Tiorka [More ...]
Tamin'ny fanambarana nataon'ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny Fizahantany tamin'ny 20.05.2020, dia voalaza fa misy fanavaozana fanaraha-maso natsangana tao anatin'ny faritry ny fepetra natao hanakanana ny fihanaky ny fiparitahan'ny Coronavirus (Covid-19), ary hiasa amin'ny daty ho tian'ny Minisiteran'ny Atitany. [More ...]
Kenan Çalışkan, Filohan'ny mpiandraikitra ny fitaterana-Sen, TCDD Taşımacılık A.Ş. Nitsidika ny tale jeneralin'ny Kamuran Yazıcı tao amin'ny biraony izy, ary nangataka ny dinidinika fampiroboroboana ny lohateny sy ny fanovana ny lohateny. TCDD Taşımacılık A.Ş. General [More ...]
"Mahafantatra ve ianao?", Novolavolaina amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ProtGA ary Miaro ny Trasiky ny Basinao, mikendry ny hanaitra ny fiaraha-monina mikasika ny vokatry ny fako eo amin'ny tontolo iainana sy ny maha-zava-dehibe ny fanodinana. Fifaninanana horonantsary nasionaly sy fohy fohy no nifarana. [More ...]
Ben'ny tanànan'ny Kayseri Metropolitan Memduh Büyükkılıç dia nilaza fa manohy ny asany izy ireo izay manalefaka ny fifamoivoizana ary mampitombo ny fampiononana ny fitaterana nefa tsy miadana. Ny ben'ny tanàna Büyükkılıç, izay manaraka ny asa ao amin'ny DSI Crossroad, dia manamafy ny fitohanan'ny fiara amin'ny fifamoivoizana ao Kayseri. [More ...]
Nivadika ny làlan-kizoana hanakanana ny lalambe voalohany ao Turkey. Alakamisy 21 Mey 2020, avy any Sakarya Arifiye Railway, fiaran-dalamby voalohany namakivaky ny fanondranana entana avy any Hongria mankany Hongria Tiorka Marmaray Tunnel tsy manam-petra. [More ...]
Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Adil Karaismailoğlu dia nilaza fa ny halavan'ny lalana fiaran-dalamby Konya-Karaman dia 100 kilometatra ary nilaza hoe: "Ny fotodrafitrasa sy ny sangan'asa nataony dia vita. Mitohy ny fandinihantsika ny fanaovana signalization. Manantena aho fa ny hanomboka ny orin'asa amin'ny faran'ny taona. " [More ...]
Turkcell, Türk Telekom ary Vodafone dia manome fanomezana 1 GB Eid al-Fitr. Miaraka amin'ity votoaty ity izay nomanina manokana ho an'ny olom-pirenentsika izay mikaroka Internet amin'ny fampielezankevitra maimaim-poana amin'ny Internet, mandritra ny fotoana rehetra an-trano [More ...]
TCDD Tasimacilik dia ahiana hanombohana rehefa hanomboka ny serivisy fiaran-dalamby Atsinanana, ny Touristic Eastern Express ary ny Van Lake Express, izay mihantona noho ny areti-mifindra coronavirus. Faly amin'ny mpandeha, mpaka sary sy mpankafy [More ...]
ASELSAN, izay tombom-barotra indostrian'ny fiarovana Tiorka, dia efa manomana ny ho avin'ny hery raha manatanteraka tetikasa hameno ny filan'ny tafika tafika Tiorka. Na eo aza ny fihetsehana haingana be amin'ny tontolo iainana ankehitriny, [More ...]
Nanao fanadinana tao amin'ny Başakşehir Çam sy ny Hopitaly City ao Sakura talohan'ny lanonana ny filoham-pirenena Erdoğan. Nahazo fanazavana avy amin'ny manampahefana, Erdogan, Minisitry ny Fahasalamana Dr. Fahrettin Koca dia niaraka tamin'ny antoko hafa liana. Tamin'ny lahateniny tamin'ny lanonam-panokafana, Japoney [More ...]
Ao amin'ny Tetikasa Trano Sosialy Fandefasana Faha-3 an'ny Kiptaş Silivri, ny tranom-bahoak'ireo mpahazo tombontsoa 513 an'arivony dia tapa-kevitra amin'ny alàlan'ny fanaovana ny filohan'ny PresidentBB Ekrem İmamoğlu. Ny sary, hitranga amin'ny alàlan'ny Notary, İBB ary Kiptaş [More ...]
Fiarovana an'i Turk, izay iray amin'ireo mpanohana lehibe ao amin'ny vondrona indostrian'ny fiarovana ASELSAN any Tiorkia; mitondra am-bala marobe ho an'ny fiara mifono fiara sy fiara mifono vy. Amie miaraka amin'ny Particle ASELSAN 35 mm dia manome TÜBİTAK SAGE sy MKE [More ...]
Izmir Metropolitan Municipality dia nanomboka fanazaran-tena amin'ny faribolana ara-tsosialy any Kordonboyu, izay an'arivony maro matetika amin'ny volana fahavaratra. Afa-po amin'ny fampiharana ity ny mponina Izmir. Ny fepetra Coronavirus dia diso eo anilan'ny fepetra famonoana Izmir Metropolitan ao Turkey [More ...]
Ny filohan'ny indostrian'ny fiarovana, STM ThinkTech nahatsapa an-tserasera ary velona. Dr. İsmail Demir sy ny ASELSAN Mpikambana sy Tale Jeneraly Prof. Dr. Haluk Görgün, Tale jeneralin'ny TUSAŞ [More ...]
Zihni Derin (teraka 1880, Muğla - daty nahafatesana 25 aogositra 1965, Ankara), Tiorka agronomista, mpanabe. Ny fambolena dite tany Torkia no nahatonga ny fanombohana sy ny fiparitahana; Fantatra amin'ny anarana hoe «rain'ny dite». Tamin'ny 1880 [More ...]
Filohan'ny Indostrian'ny fiarovana Dr. İsmail DEMİR dia nanao fanambarana momba ny tetik'asa Joint Strike F-35 Lightning II tao amin'ny tontonana nokarakarain'ny STM ThinkTech. Tao amin'ny fanambarana nataon'ny Filoha DEMİR, "Etazonia [More ...]
Engin Arık (14 Oktobra 1948 - 30 Novambra 2007) dia mpahay fizika zato Tiorka ary mpampianatra taloha tao amin'ny departemantan'ny fizika ao amin'ny Oniversite Boğaziçi. Ny toeram-pitrandrahana Thorium dia mety ho vahaolana madio sy toekarena amin'ny olan'ny angovo. [More ...]
Miaraka amin'ny traikefa azo avy amin'ny T-629, T-129 ATAK Attack sy Tactical Reconnaissance Helicopter Project, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Helikoptera manafintohina novolavolain'i (TAI) io. Orinasa Tiorka sy fiaramanidina Tiorka [More ...]
Mahmut Özer, lefitry ny minisitry ny fanabeazam-pirenena, dia nilaza tamin'ny gazety iray momba ny drafi-piraisan'ny valan'aretina taorian'ny haino aman-jery an'ny R&D napetraka tao amin'ireo sekoly ambaratonga ambony. Hoy i ,zer, "hanana foibe 20 R&D eo ho eo izahay. Ny foibe tsirairay dia hafa [More ...]
Minisitry ny Fambolena sy ny Ala Bekir Pakdemirli dia nanambara fa ny orinasam-pambolena fambolena lehibe indrindra any Tiorkia, izay hitondran'i Şanlıurfa Ceylanpınar State Farm amin'ny famitrandrahana rano 60 22 ha no vita ary ny 2020 Mey XNUMX [More ...]
Androany, Başakşehir Çam sy ny Hopitaly ny tanànan'i Sakura dia niditra tamim-pahakingana tanteraka tamin'ny fandraisana anjaran'ny filoha Recep Tayyip Erdoğan sy ny praiminisitra japoney Shinzo Abe. Afaka mametraka marary amin'ny ambaratonga 35 isan'andro sy ny endri-javatra 500 [More ...]